Thursday November 21, 2019 - 17:02:07 in Articles by Hadhwanaag News
Waxay ii ahayd iyadu noloshayda dhammaanteed.
Waxay ii horseeday wannaag dhammaantii. Markasta waxay ilaalin jirtay wadnahayga in aanuu dhaawac soo gaadhin. Noloshada gabi ahaanteedba way bedeshay. Ka hor iyada barashadeeda waan noolaa, nafina way igu jirtay balse maan ahaan jirin qof jooga haddana jiifa.
Iimay ogolaan jirin inaan iyada dhiggeeda nolol la qaybsado waayo? Waxay ku kalsoonayd jacaylkayga balse maxay iigu taallaa? Waxan ka daynwaayey hagardaamo iyo handidaad, waxan ka dayn waayey "Cidkalaad la socotaa.” Waan rumaystay inay cid kale oon aniga ahayn xidhiidh la leedahay, balse waxay ahayd Male-Awaal wax uu ku dhisanyahay aanuu jirin. Anigaa Durmaan aan arki waayey meel laga garaacayo, raacay.
Intaan ballamiyo ayaan haddana u jari jiray, oon u sheegi jiray marka danbana been iyo balaayo aan la mahadin. Geeri aan dhicin baan u sheegi jiray, "Wiil aanu saaxiib nahay Ayeydii baa mardhawayd dhimatay.” Iyo wax aan dhaamin ayaan u sheegi jiray, halkaan dhinaca kale kaan ayeydiibaa dhimatay leeyahay aanu wada ciyaarayno oon la joogo! Markalena waxaan u sheegaa in Alleenkii gacantu (Mobile) uu biyo igaga dhacay deedna aan la ismaqlayn. Markalena waxaan u sheegi jiray inay Tuugi iga qaateenba oonan wax Alleen ah haysan. dhallinyarooy ba’. Haddaan beentaa muddo ku waday waxay go’aansatay inay ii soo iibiso Alleen si aanay codkayga marnaba u waayin si xidhiidhkayaga wax kastoo dhib u keenaya u joojiso. Jacaylooy ba’.
Inay qof aanad jeclayn uma soo jeedsatid, ilayn qof aanad doonayn ma danaysid. Balse aniga intaasoo keliya ma ahayne waxa ii dheeraa inaan ahaa Damiir laawe, aan wixii dantiisa ah aqoon, waxaan ahaa Doqon garanwaayey Dahab uu haystay inuu daryeelo. Waxan noqday nin ay qaadday dhallinyaranimo oo shalmad raaca tii dhaqaaqdaba daba gala. Sidaan u lahaa "Tani tay ma aha.” Ayaan is arkay anigoo dhulka ka tegay cirkana gaadhin. Waxan is arkay in aanan haysan Geed aan ku tiirsado, waxan is arkay anigoo Dheemantaydaan haystay ee dhib oo dhan iga ilaalin jirtay aan ka daldoorsaday. Waxan garan waayey goor aan ku idhi, " Xidhiidhkeenna ma doonayo inuu sii xidhnaado.” Talo waa "Mar aad garan waydo iyo mar aad gaadhi waydee” Waxan xasuustay markay iyadoo ka murugoonaysa arrintaa iigu halcelisay, " Nafsi Jacayl yaanu ku helin hadhoowna ha isqoomamayn.”